May 17, 2020 - Lupyo News
ပူရိသတွေရဲ့အသဲနှလုံးကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဗွီဒီယို
May 17, 2020 by Lupyo News
ပူရိသတွေရဲ့အသဲနှလုံးကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဗွီဒီယို အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က က အခုချိန်ထိတိုင် တစ်နေ့တစ်ခြား အလှတွေတိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အိမ်ထောင်ရေးကို မစဉ်းစားသေးပဲ တစ်ကိုယ်တည်းအပျိုကြီးအဖြစ် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် Covid – 19 ရောဂါကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ရပ်နားထားရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အိမ်မှာနေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရင်း Healthy Food တွေ စားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတင် ပိုလှလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ကျစ်လျစ်ပြီး ပိုလို့တောင် လှလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် သူမ ဒီနေ့ညနေပိုင်းတင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကတော့ … Read more
ကိုဗစ်​ကာလမှာ ပြန်​စရာလမ်းစရိတ်​ မရှိ​တော့၍ မြစ်ကြီးနားကနေ မန္တလေးအထိ မိုင်ပေါင်းရာချီ ခြေကျင်လျှောက်​ အ​မေ့ဆီပြန်လာခဲ့ရတဲ့သားတစ်ယောက် မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားမှသည် အညာက အမေ့အိမ်ဆီ တစ်မျှော်တစ်ခေါ် ရှည်လျားလွန်းတဲ့ မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ရထား လမ်းကြီးရဲ့ ဇလီဖားတုံးတွေပေါ် ဇင်လင်း ခပ်သွက်သွက်နင်းရင်း ဖြတ်ကျော်နေတယ်။ ခပ်နွမ်းနွမ်း ပုဆိုးနဲ့ အရောင်လွင့်နေတဲ့အင်္ကျီ လေးတစ်ထည်ဝတ်ထားတဲ့ ဇင် လင်းဟာ ကျောပေါ်မှာ ပီနန်အိတ် လေးတစ်လုံး လွယ်လို့ပါ။ မိုးတွေတဖွဲဖွဲကျနေလို့ မိုးစိုထားတာ ကြောင့် ရထားလမ်းရဲ့ဇလီဖားတုံး တွေက နင်းလိုက်တိုင်း ချောနေ တယ်။ ဇင်လင်း လဲမကျသွား အောင် သတိထားနင်းနေတယ်။ သူ့ဦးတည်ရာက ဟိုးတောင်စူးစူး ဘက်၊ အတိအကျဆိုရမယ်ဆိုရင် မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေ မိုင်ပေါင်းငါး ရာကျော်ကွာဝေးတဲ့ ဇင်လင်းရဲ့ ဇာတိ ဆီမီးခုံဆိုတဲ့ မြို့ကလေးဆီ ကိုပါ။ ဟုတ်တယ်။ … Read more
လင်ကြီး က အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး—- ဖြစ်ရပ် လင်ကြီး က အလုပ်ကအပြန် မိန်းမနဲ့ လင်ငယ် ချစ်ရည်လူးနေကြတာ ပက်ပင်းမိလို့ လမ်းမပေါ်စွဲထုတ်ပြီး သတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်…. ထိုင်းနိုင်ငံ SAMRONGTAI ပြည်နယ် OLD RAILWAY RD မြို့တွင် Wasi Yongchaiyudh အမည်ရှိ အမျိုးသားသည် သူ၏ဇနီး Thunyarat Sathianthai နဲ့နောက်လင်ငယ် Tinnakit Sanya တို့ ခိုးစားနေကြတာကို မြင်တွေ့ပြီး နောက်လင်ငယ် Tinnakit ကို လမ်းမပေါ်ဆွဲခေါ်လာပြီး သေနတ်နဲ့ပြစ်သတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Wasi သည် ဇနီးသည် Sathianthai ကို မသင်္ကာနေခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း အပေါင်းအသင်းများက မင်းမိန်းမ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ … Read more
ခေတ်ကြီးကတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ စက်ဆုတ်ရွံရှာမှု့တွေကတစ်နေတစ်မျိုးမရိုးရအောင်တွေ့နေရပါလား ​ပျော်​တုန်းက​ပျော်​ပြီး က​လေးရလား​တော့မှ ပစ်​ထားကြတယ်​ မင်းလူဖြစ်ရတာ မတန်ပါဘူး က​လေးရယ်​ ပျော်​ရတာကို သဘောကျပြီးဗိုက်ကြီးတာကို သဘောမကျတဲ့အမေနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကကိစ္စလောက်သာတာဝန်ယူတတ်တဲ့အဖေမျိုးဆီမှာ မင်းလူဖြစ်ရတာ မတန်ပါဘူး ကလေးရယ် ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် လူသားမဆန်မှု့တွေ မကြာခဏတွေ့မြင်ကြားနေရတယ် အပျော်ကြူးကြတယ် Living together လက်မထပ်ရသေးပဲ အတူနေထိုင်ခြင်းတွေ အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နေကြတယ်… မဖုံးနိုင် မဖိနိုင်တော့မှ ရှက်ရကောင်းမှန်းသိကြပြီး လူဘ၀ကို လာပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ လူမမည် ကလေးလေးတွေကို စွန့်ပစ်ချင်လာကြတယ် လူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုတာ ကိုတော့ လုပ်ဖို့မရှက်ကြဘူး ဒီကလေးလေးကိုလဲ စေတနာရှင် လူသားဆန်တဲ့လူတစ်ချို့ရှိနေတဲ့အတွက် ကံကောင်းစွာ အသက်ရှင်ခွင့် လူဖြစ်ခွင့်ရတာပါ…အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်ုKo Shwe Thura photo credit —————————- Unicode ​ပြျော​တုနျးက​ပြျော​ပွီး က​လေးရလား​တော့မှ ပဈ​ထားကွတယျ​ … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပွစိပွစိလုပ်နေသေးရင် တန်ဖိုးထားပါ …
မိန်းကလေး တစ်ယောက်က မလိုအပ်ပဲနဲ့ စကားတွေ အများကြီး မပြောတတ်ဘူး (ပွစိပွစိ လုပ်နေသေးရင် တန်ဖိုးထားပါ) မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပွစိပွစိလုပ်နေသေးရင် တန်ဖိုးထားပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မလိုအပ်ပဲနဲ့ စကားတွေ အများကြီးမပြောတတ်ဘူး … အရေးမပါပဲနဲ့လဲ လေကုန်မခံတတ်ဘူး … ဟိုလို မလုပ်နဲ့ ဒီလိုမလုပ်တားနေသေးတယ်ဆိုတာ စိတ်ပူနေသေးလို့ လို့သာ မှတ်ပါ … ပြီးတော့ သ၀န်တိုတတ်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သဘာဝပါ ဒါစိတ်ပျက်စရာမှ မဟုတ်တာ … သ၀န်တိုတယ်ဆိုတာ ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ် ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ချင်သလိုတပ်ပြီး နာမည်ဆိုးတွေ ထပ်ထပ်မပေးပါနဲ့ … ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပိုင်ချင်တဲ့ အတ္တတော့ ချစ်တတ်တဲ့ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် … တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ ဘယ်သူက ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်နေမှာလဲ … … Read more
ကျင်​စက်​ဖြင့်​ထိုးမည်​ဟု ​ပြောပြီး သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်​မှု မြဝတီမြို့၊အမှတ်​(၄)ရပ်​ကွက်​၊သရက်​​တောအ​နောက်​ဘက်​​တောစပ်​​နေထိုင်​သူ(မ)၁၅နှစ်​သည်​ ​၁၅.၅.၂၀၂၀ည(၇)နာရီအချိန်​ နေအိမ်​ရှိမိသားစုဝင်​များနဲ့ရှိ​နေစဉ်​ မိမိခင်​မွန်းဖြစ်​သူ​ခေါ်သည်​ဟုထင်​ကာလမ်းမီးပျက်​​နေချိန်​ ​နေအိမ်​​ရှေ့လမ်းမ​ပေါ် မီးအချက်​ပြ​ခေါ်သူထံသို့သွား​ရောက်​ရှိ​သောအခါ ဗိုလ်​​လေး(ခ)ဗိုလ်​ကျားဖြစ်​​ကြောင်းသိရှိရပြီး၎င်းမှလက်​ကိုဆွဲကာ လျှစ်​စစ်​ကျင်​စက်​ဖွင့်​ပြပြီးလမ်းမှတစ်​ဆင့်​​ တောစပ်​သို့​ခေါ်​ဆောင်​သွားခဲ့ရာကျမမှ​အော်​မည်​ပြု စဉ်​ ကျင်​စက်​ဖြင့်​ထိုးမည်​ဟု​ပြောသဖြင့်​ မ​အော်​ရဲဘဲ​နေအိမ်​နဲ့ ကိုက်​(၂၀၀)ခန့်​ရှိ ၀ါးရုံပင်​​အောက်​သို့​ရောက်​​သောအခါ ကျမအားဆွဲလှဲချကာ ခန္ဓာကိုယ်​အားညစ်​ညမ်းစွာအမျိူးမျိူးပြု လုပ်​ကာသားမယားအဖြစ်ပြု ကျင့်​ခဲ့ပြီး မည်​သူ့ကိုမှမ​ပြောပြရန်​​ပြောဆိုချိန်​​ခြောက်​ပြီးပြန်​သွားခဲ့​ကြောင်း မ(၁၅)နှစ်​မှမြဝတီရဲစခန်းတွင်းတိုင်​တန်းသွားခဲ့ပါသည်​။ မြဝတီရဲစခန်းမှ သားမယားပြုကျင့်​သူဗိုလ်​​လေး(ခ)ဗိုလ်​ကျားနှင့်​အမှုကိစနဲ့ပက်​သက်​ပြီး​နေအိမ်​​ရှေ့သို့ညအချိန်​ ဓားကိုင်​​ဆောင်​​အော်​ဟစ်​ခြမ်း​ချောက်​သူနှာ​ခေါင်​ကြီးတို့(၂)ဦးအား (ပ)၃၈၈/၂၀၂၀ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ ၃၇၆/၃၇၇/၅၀၆/၁၁၄တို့ဖြင့်​အမှုဖွင့်​လစ်​ထား​ကြောင်း​ရေးသားတင်​ဆက်​အပ်​ပါသည်​။ ရုပ်သံကြည့်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် Credit to ..ဘီဝမ်း ———————— Unicode ကငျြစကျဖွငျ့ထိုးမညျဟု ပွောပွီး သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့မှု မွဝတီမွို့၊အမှတျ(၄)ရပျကှကျ၊သရကျတောအနောကျဘကျတောစပျနထေိုငျသူ(မ)၁၅နှဈသညျ ၁၅.၅.၂၀၂၀ည(၇)နာရီအခြိနျ နအေိမျရှိမိသားစုဝငျမြားနဲ့ရှိနစေဉျ မိမိခငျမှနျးဖွဈသူချေါသညျဟုထငျကာလမျးမီးပကျြနခြေိနျ နအေိမျရှလေ့မျးမပျေါ မီးအခကျြပွချေါသူထံသို့သှားရောကျရှိသောအခါ ဗိုလျလေး(ခ)ဗိုလျကြားဖွဈကွောငျးသိရှိရပွီး၎င်းငျးမှလကျကိုဆှဲကာ လြှဈစဈကငျြစကျဖှငျ့ပွပွီးလမျးမှတဈဆငျ့ တောစပျသို့ချေါဆောငျသှားခဲ့ရာကမြမှအျောမညျပွု စဉျ ကငျြစကျဖွငျ့ထိုးမညျဟုပွောသဖွငျ့ မအျောရဲဘဲနအေိမျနဲ့ ကိုကျ(၂၀၀)ခနျ့ရှိ ဝါးရုံပငျအောကျသို့ရောကျသောအခါ ကမြအားဆှဲလှဲခကြာ ခန်ဓာကိုယျအားညဈညမျးစှာအမြိူးမြိူးပွု လုပျကာသားမယားအဖွဈပွု … Read more
မိခင်အရင်းကို ပါးတွေရိုက်ပြီး နှိပ်စက်နေတဲ့ အမျိုးသား (ရုပ်/သံ)
မိခင်အရင်းကို ပါးတွေရိုက်ပြီး နှိပ်စက်နေတဲ့ အမျိုးသား (ရုပ်/သံ) ရုပ်သံဖိုင်ကအောက်ဆုံးမှာပါ… တရုတ်တွေဟာ တိရစ္ဆာန်ကိုမှ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာ မဟုတ်ပါဘူး, မိခင်အရင်းကို တောင် အခုလိုရက်စက်တာ.. ခတ်ခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝကြီးဟာ ရခဲလှပါပေတယ်ဗျာ…လူ့ဘဝတစ်ခုလေးကို ရဖို့(၉)လလွယ် (၁၀)လဖွား ပေးအမေက ကျေးဇူးအကြီးမာဆုံး မဟုတ်ပါလားဗျာ.. အမေဆိုတာ ဘဝကြိးမှာ တန်းဖိုးအကြိးပါဗျာ..အခုလိုရက်ရက်စက်စက်တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ..သူ့ကို သွားပြောတော့ ဘာကိုမှ မကြောက်ဘူးတဲ့.. လူတစ်ယောက်စိတ်က လူစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် တိရစ္ဆာန်မိခင်တစ်ကောင် ရဲ့ စိတ်တောင် မှီတော့ဘူးဗျာ..စိတ်ဓာတ်တွေ အယူအဆတွေ ကွဲလွဲမှုက တော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ သူ့ကို အမြင်လေးပြောခဲ့ပါအုံးနော် အမေ … တဲ့။ ဘယ်လောက် အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး၊ အင်အားပါတဲ့ စကားလုံးလေးလဲ။ ဒီစကားလုံးလေးကို ပညာရှင်တွေ ခေတ်အဆက်ဆက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့ကြသလို စာရေး ဆရာကြီးတွေလည်း ခေတ်အဆက်ဆက် ရေးသားဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။ … Read more
” မိန်းက​လေးတိုင်း ဖတ်​ဖို့ ”
ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်​က​လေးတစ်​​ယောက်​ ဘဝ ပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး ” မိန်းက​လေးတိုင်း ဖတ်​ဖို့ ” ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့…… မိန်​က​လေးတစ်​​ယောက်​ ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ယောက်ျားကို ချစ်နေသေးတဲ့…… စိတ်ကြောင့်သာ ဘဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ။ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ အယုံကြည်​လွယ်​တယ်​……ခံစားရလွယ်​တယ်​ အားနာလွယ်​တယ်​…… အစွဲလမ်းကြီးတတ်​တယ်​ဆိုရင်​ ​နောင်​တ​တွေနဲ့…… အလိမ်​အညာ​တွေပဲ ခဏခဏ ​ခံနေရမှာ​ပေါ့။ ဖောက်​ပြန်​တတ်​တဲ့ ​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​ကို…… ဘယ်​​တော့မှ ခွင့်​လွှတ်​ပြီး ​ရှေ့ဆက်​လက်​မတွဲပါနဲ့။ အ​နေနီးမှုကို မလွန်​ဆန်​နိုင်​ပဲ ​ဖောက်​ပြန်​တာဟာ…… အချစ်​ကို ကိုးကွယ်​တာမဟုတ်​ဘူး။ မွေးရာပါ ဆင်​ခြင်​တုံတရား အားနည်းတာ.……စာရိတ္တ သက်​လုံမ​ကောင်းခဲ့တာပါ။ ပြောချင်​တာက……ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာကို ​ရွေးချယ်ရတဲ့အခါ……သိက္ခာကိုသာ ဦးစား​ပေးပါ။ လိုချင်​တာနဲ့ လိုအပ်​တာကို ​ရွေးချယ်တဲ့အခါ……လိုအပ်​တာကိုသာ ဦးစား​ပေးပါ။ ဖြစ်​ချင်​တာနဲ့ ဖြစ်​သင့်​တာကို ​ရွေးချယ်တဲ့အခါ…… ဖြစ်​သင့်​တာကိုသာ ဦးစား​ပေးပါ။ လက်​တလော … Read more
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်​ပျောက်​ဆေး ရွှေမြန်မာ​ဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကိုအမြစ်ပြတ်ကုသနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုအာမခံချက်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြင့်တင်ပြလာ ဧပြီလဆန်းတွင်နိုင်ငံတေည်သမ္မတရုံးသို့စတင် တင်ပြ သမ္မတရုံးမှကော်မရှင်ထံတင်ရန်လမ်းညွှန် ကော်မရှင်ထံဆက်တင် ဧပြီ၂၁ရက်တွင်ကော်မရှင်မှကျန်းမာရေးဝန်ကြီးထံတင်ရန် လမ်းညွှန်ပြီးဝန်ကြီးမှလာရောက်တင်ပြရန်ခေါ်ယူ ဧပြီ၂၆ရက်တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအားအသေးစိတ်ရှင်း လင်းပြသခဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမှဆေးသုတေသနဌာနသို့ဆေးဝါးနမူနာ များပေးပို့စစ်ဆေးစေခဲ့ မေလ ၇ ရက်နေ့တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမှခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ စမ်းသပ်မှူအဆင်ပြေအောင်မြင် ပါကြောင်း. တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်နေပါ၍လွှတ်တော်၌တင်ပြ၍ဥပဒေပြု ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်နေသေးပါကြောင်း မေလ ၁၈ ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများစတင်ပါကအရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တင်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပေး ပါမည့် အကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံမှလည်းဆေးဝါးများစမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ကြရန်နှင့်သင့်တော်စိတ်ချရမည့်အခြေအနေရှိဆေးဝါး များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြရန်လမ်းညွှန်ထားပါကြောင်း ယခုဆေးမှာ တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်သော်လည်းသောက်ဆေးအပြင်ထိုးဆေးအဖြစ်ပါအသုံးပြုနိုင် လိုအပ်လျှင်အသုံးပြု ရမည်ဖြစ်သဖြင့်ဥပဒေခွင့်ပြု ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကြောင်း လွှတ်တော်တွင်တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီးဆုံးဖြတ်၍ဥပဒေပြုခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာစမ်းသပ်ကုသခွင့်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း အမှန်တကယ်သာခွင့်ပြုချက်လည်းရ အောင်မြင်စွာကုသနိုင်ပါက မိမိတို့မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းတင်မဟုတ်ပဲ လူသား အားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်ပါကြောင်း ခွင့်ပြာချက်ရနိုင်အောင်လည်းဝိုင်းဝန်တင်ပြညှိနှိုင်းပေးပါမည့်အကြောင်း အောင်မြင်ပါစေဟု လည်းဆန္ဒပြုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ ဆေး—မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး. ဆေးပေါင်း စားဆေးထိုးဆေး ဆေးဝါးပညာရှင်—ဗိုလ်လှဖေ(ခ)သခင်လှဖေ. ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်. မူရင်းပညာရှင် လက်ရှိ—ဗိုလ်လှဖေ၏မြေးအရင်း ဌာန—လက်ရှိဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ဆေးပေါင်းရုံမှာဖောင်ကြီးကိုဗစ်ရောဂါကုဆေးရုံအနီး ကုသပုံ—‘အရေးပေါ်အနေအထားအသက်ရှူစက်ကူနေရသူလူနာအား ၄င်းဆေးပေါင်းရည် .5 … Read more
ကားပျက်လို့ရပ်နားနေစဉ် ဓားမြတိုက်ခံရ(ရုပ်သံ) ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာ ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပီ အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါနော်… သတိလေးနဲ့ သွားလာကြပါနော်… လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေက တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုပျက်စီးလားနေပီ video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ #ပေသီး# ————————— unicode ကားပကျြလို့ရပျနားနစေဉျ ဓားမွတိုကျခံရ(ရုပျသံ) ဒီလိုခတျေကွီးထဲမှာ ဒီလိုမြိုးတှဖွေဈလာတာ ကွောကျဖို့ကောငျးလာပီ အားလုံးဂရုစိုကျကွပါနျော… သတိလေးနဲ့ သှားလာကွပါနျော… လူတှရေဲ့အကငျြ့စရိုကျတှကေ တဈနတေ့ဈခွား ပိုပိုပကျြစီးလားနပေီ video ဖိုငျကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ။ #ပသေီး#